FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALANO ESPAÑOL - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana Alano Español
Puma de Malandanza ny Alano Español amin'ny 10 volana
Ny Alano Español dia molosser (alika goavambe goavambe izay any Molossia no niandohany). Izy io dia manana endrika voalohany izay ny fisiolojika ankapobeny dia mifanaraka aminy indrindra amin'ny hazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha mandritra ny fotoana maharitra ary mitazona lalao na omby mandritra ny fotoana maharitra rehefa voabaina. Miaraka amin'ny firafitry ny vatana sahaza azy tsara, ny tadin'ny taolan-tehezana dia arched fa tsy mandrindra, ny tratra dia mahatratra ny haavon'ny kiho, miaraka amin'ny soroka matanjaka sy matevina ary malazo. Ny tongotra eo aloha dia matanjaka kokoa noho ny aoriana, ary mahitsy na zahana avy eo aloha na avy amin'ny sisiny. Ny paws dia matetika lehibe kokoa noho ny an'ny alika hafa mitovy habe sy lanjany. Ny mombamomba ny tsipika hazondamosin'i Alano dia miakatra kely mankany amin'ny faran'ny lamosina na, farafaharatsiny, mahitsy, fa tsy midina. Ny hozatra ao amin'ny aoriana dia mandroso tsara ary ny tongony aoriana dia mampiseho zoro voafaritra tsara mifarana amin'ny tongotra matanjaka. Ny rambony dia matevina kokoa eo am-pototra ka mihidy hatramin'ny teboka iray ary tsy potehina mihitsy satria ampiasaina amin'ny familiana eo amin'ny fihodinan'ny alika sy ny tain-drorohany rehefa mihaza na miasa amin'ny omby antsasa-dia na bibidia. Rehefa entina ambany ny rambony dia tsy misy na dia iray akory aza amin'ny halavany mijanona manoloana ny faritry ny alika. Ny kibo dia alaina ao anatiny, manome azy endrika fanatanjahan-tena kokoa noho ny karazana molosser mavesatra kokoa. Matanjaka sy matanjaka ary malalaka ny hatoka, mampiseho volo roa sosona izay tsy tokony hahantona amin'ny ambany mihitsy. Ny lohany dia brachycephalic (karazana Bulldog) amin'ny endriny, toradroa amin'ny fisehoany ary miaraka amina endrika matotra. Ny sakamaso dia malalaka ary maneho 35% eo ho eo ny halavan'ny loha, miaraka amin'ny fijanonana mitsangana. Ny orona dia lehibe, malalaka ary mainty misy vavorona. Matetika ny sofina dia voakapa, boribory kely amin'ny tendrony. Ny sofina tsy mioty dia salantsalany ary entina mivalona amin'ny tarehy. Manana valanorano matanjaka be ny Alano. Mivelatra ny nify, misaraka tsara miaraka amin'ny manaikitra hety mahery sy mafy orina na manaikitra hety mivadika. Avela hanaikitra eo ambany raha toa ka 2 mm na latsaka. Rehefa mandeha izy, ny Alano dia manana dian-tongotra panther maloto, noho ny fahazarany mitondra ny lohany ambany, somary mihetsiketsika mihetsiketsika avy hatrany hatrany amin'ny lafiny iray mba hahitana ny sorony matanjaka kokoa. Alanos dia molosser tsy manam-petra izay afaka mitazona trotitra tsy miovaova, maharitra, mailaka mandritra ny fotoana maharitra. Rehefa mivezivezy dia haingana sy malefaka izy ireo, mamelatra sy mivoaka tanteraka ny vatany iray isaky ny dingana tsirairay, manasokajy ny sakana amin'ny fahakingana lehibe, manao azy ho toa tsy ho reraka mihitsy izy ireo na dia takiana aminy aza ny mitazona ilay kilaometatra an-kilaometatra maro. Ny lokon'ny palitao dia misy volondavenona mavo sy amboadia, volo sy mena (na amin'ny hazavana na amin'ny maizina), na misy tigering (brindling) na na sarontava mainty. Mainty sy mainty - miaraka amin'ny tigering foana amin'ny marika tan izay nofaritana tamin'ny fenitra Espaniola ho 'negro y atigrado' adika mainty sy tigered. Avela ny marika fotsy, fa eo amin'ny orona, tendany sy tratra, tongotra ambany, kibo ary amin'ny tendron'ny rambony ihany, ny fotsy tsy tokony hihoatra ny vatana.
Ny toetran'ny Alano dia mibahan-toerana be sy matotra nefa tena mahafehy ny tompony, manao fanekena azy. Ity karazana ity dia be fitiavana amin'ny fianakaviana sy ny olona fantany. Tena manam-paharetana sy tsara amin'ny ankizy koa izy io. Izy ireo dia azo atokisana, tsy miovaova, tena mpankato ary manaikitra kely. Na izany aza, ny Alano dia hijery olon-tsy fantatra ahiahiana, hanafika tsy misy fampitandremana, raha tsy rehefa mitaky izany ny toe-javatra. Rehefa mitazona ny bibidia miaraka amin'ny valanoranony, na manao ahoana na manao ahoana ny habeny, ny natiora, na ny maha-mahery setra an'ilay biby, dia tsy raharahan'ny Alano tanteraka ny fahatsapana toy ny fanaintainana na tahotra ary tsy hitolo-batana izy mandra-pilazana azy hanao izany na mandra-pahitany ny baiko nomena. Ny Alano dia hiady mandra-pahafatiny hanaraka baiko, hiady amin'ny lambo dia na hatramin'ny omby hatramin'ny farany. Izy ireo dia mpiasa tsy matahotra, mahatoky, be fandavan-tena, ary miasa mafy. Mahay mandanjalanja sy milamina, matoky tena miaraka amina tokonam-panaintainana mafy. Mahery sy miaro, nefa tsy mahery setra. Ireo toetra mampiavaka ny karazany ireo dia tsy miharihary tanteraka mandra-pahatongan'ny fahamatorana feno, izay matetika mitranga rehefa tonga amin'ny 2 1/2 taona na mihoatra ny alika. Satria ity karazan-kazo ity dia namboarina hiasa anaty fonosana amin'ny maha ekipa azy, tsara izy ary hampahasosotra manodidina ny alika hafa, mankafy romp mahafinaritra, milalao ary miala voly fotsiny. Na izany aza, tsy hihemotra ny Alano raha misy ny fanamby ataon'izy ireo. Ny Alano Español, toy ny karazana mastiff rehetra, dia tokony hanana tompony manjaka izay mahatakatra fihetsika canine voajanahary. Afaka mianika hazo miaraka amina hafahafa toa saka izy ireo ary mahavita miakatra amin'ny toerana avo avy amin'ny toerana mijoro tsara. Ny Alano dia mety ho sarotra vaky trano , izay mahatonga ity karazany ity ho tsara indrindra amin'ny alika any ivelany. Ny zanak'alika Alano lahy dia mazàna mitsako ary ho bebe kokoa Handringanana noho ny zanak'alika Alano vavy. Ny tanjona amin'ny fampiofanana ity alika ity dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miasa ao ambanin'ny tsipika mpitarika tokana ary voafaritra mazava tsara. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo.
Haavony: Lehilahy 23 - 25 santimetatra (58 - 63 cm) Vehivavy 22 - 24 santimetatra (55 - 60 cm)
Milanja: eo anelanelan'ny 75 - 89 pounds (35 - 40 kg) mampiseho firindrana foana eo amin'ny habe sy ny lanjany.
Ity karazana ity dia mbola tsy namboarina ho an'ny endrika ivelany. Fa kosa alika ambanivohitra taloha izay nampiasaina hiasa mafy ao amin'ny firenena amin'ny toe-javatra sarotra mandritra ny taona maro, izay ny fittest ihany no ho velona. Mety ho izany no antony mahatonga ny Alano Español ho mpanohitra tena matanjaka sy salama, tsy mora voan'ny aretina manokana. Ny tompon'ny Curro dia nilaza hoe: 'Rehefa maratra na marary, dia miavaka ihany koa ny fotoana iverenan'izy ireo. Ohatra: 80 taona i Curro dia voan'ny parvovirosis (Parvo virus amin'ny teny espaniola). Ilay mpitsabo biby dia tsy nanome fanantenana ahy ho velona mihoatra ny herinandro i Curro taorian'ny nahitany ilay virus. 5 andro monja no nanasitranana ny tenany. ' Miaraka amin'ny Cane Corso, ny Alano dia iray amin'ireo karazan-javamaniry molosser vitsy izay tsy mandehandeha, tsy miteny na moka.
Mety indrindra hipetrahana ao an-tokotany sy hatoriana ivelany, ny Alano dia mahazaka hafanana mafana sy mangatsiaka, fahamainana sy hamandoana tsy misy olana. Ohatra: mandritra ny ririnina any Espana any an-tanety, ny mari-pana dia miakatra hatramin'ny 30 ambany ka hatramin'ny 20 avo (ambanin'ny zero Celsius). Any avaratry Espana dia avo dia avo ny hamandoana. Any amin'ny faritra afovoany dia maina ny ririnina amin'ny ririnina mangatsiaka ary fahavaratra mafana be, fa ny atsimo kosa mety ho maina na mando (miankina amin'ny faritany) fa misy maripana sy mafana. Matory any ivelany foana ny Espaniola Alano ary hizatra amin'ireo toetrandro rehetra ireo tsy misy olana.
chihuahua miharo mpiandry aostraliana
Raha tsy ampiasaina ho toy ny alika miasa izy ireo fa biby fiompy ao amin'ny fianakaviana dia mila manome fanazaran-tena isan'andro ho azy ireo ianao. Farafaharatsiny mandeha telo isan'andro , ny iray amin'izy ireo dia somary lava kokoa amin'ny toerana malalaka ahafahan'izy ireo mihazakazaka sy milalao, ara-dalàna ao amin'ny firenena.
11-14 taona eo ho eo.
Ny Alano dia alika fohy volo izay mila fikarakarana kely. Ny fikosehana tsindraindray amin'ny borosy fingotra dia hanampy azy handatsaka ny volo madiridinika sy tsy hanadino azy handatsaka volo be ao an-trano. Na izany aza dia alika ivelany izy ary tokony ho eny ivelan'ny trano matetika. Mandrosoa raha tsy ilaina satria manala ireo menaka voajanahary ao amin'ny hoditra. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Alano dia karazany tena taloha. Misy teoria maromaro momba ny niandohany. Ny ankamaroan'ny olona dia mampifandray ny Alanos Espaniola ankehitriny amin'ireo alika nentin'ny Alanos (Alans) niaraka tamin'izy ireo rehefa nanafika ny Saikinosy Iberia tamin'ny taona 406 AC. Ireo alika ireo dia tsy nipoitra avy amin'ny karazany fantatra ankehitriny, fa kosa dia razamben'ny karazan-java-manitra malaza izay malaza be ankehitriny, toa an'i Great Dane na Dogue de Bordeaux. Nisy alano alano tsy tany Espana ihany taloha, fa tany amin'ny toerana hafa eran'ny Eropa nanafika ny Alans, na izany aza, tany Espana ihany no tafavoaka velona nandritra ny 1500 taona mahery ka mandraka ankehitriny. Vondron'ireo mpankafy Alano nandany fotoana be tamin'ny fiandohan'ny taona 1980 niasa ho amin'ny tanjona ny hahitana ny tena toetran'ny mponina any Alano. Ny karazana dia tsy tamin'ny fampisehoana alika na nitaiza ny hatsaran-tarehy. Tamin'io fotoana io dia nieritreritra ny rehetra fa nanjavona tamin'ny Alano ny ankamaroan'ny dia an-tsambo mpihaza lambo sy ny fiompiana omby any Espana. Carlos Contera sy ny mpiara-miasa aminy dia nitady fatratra ny tontolo ambanivohitra Espaniola nitady an'ity molosser malaza ity, izay nanomboka ny fihenany rehefa voarara ny fandraisana anjara amin'ny adin'omby tamin'ny taona 1883. Nahomby ny fikarohana. Nahita Alanos vitsivitsy tao Extremadura (atsimo andrefan'ny Espana) sy Castille (lemaka afovoany) izy ireo nefa koa mponina marobe sy marin-toerana manodidina ny 300 Alanos ao amin'ny Lohasaha Encartaciones any avaratr'i Espana. Ireo alika alano ireo ihany izay nampiasaina nandritra ny taonjato maro mba hitantanana omby iray tsy omby ala. Ny famerenana amin'ny laoniny ny karazany dia nanomboka tamin'ny tsara indrindra tamin'ireo Alanos ireo. Ny ADNn'izy ireo dia nodinihan'ny Faculty of Veterinary Medicine ao amin'ny University of Cordoba mba hanomezana toky ny maha-izy azy ireo. Ny Espaniola Alano, taloha, dia nampiasaina tamin'ny tanjona fototra dimy:
Fikojakojana omby na bibidia.
Ady omby (voarara ny lalàna Espaniola tamin'ny taonjato faha-19).
Fihazana lalao lehibe.
Fiambenana sy fiarovana.
Androany dia ampiasaina amin'ny fikirakirana omby sy fihazana omby ihany. Rehefa miasa dia miankina amin'ny manaikitra manaikitra azy, ny fankatoavany ary ny toetrany mahay mandanjalanja ny Alano Español. Nanjary nalaza ny fangejana ny valanoranon'i Alano Español. Io dia mandaitra izaitsizy, tsy noho ny alika manaikitra amin'ny valanoranony manontolo, manitatra ny fihazonana amin'ny molars tsy tapaka ary mitazona azy mandritra ny fotoana lava, fa koa satria hamotsotra ny haza izy ireo rehefa nasaina nanao izany. Ny famotsorana dia manan-danja toy ny fihazonana rehefa miasa miaraka amin'ny alika. Ny sasany amin'ireo talentan'i Alano dia misy ny fiompiana, fihazana, fanarahan-dia, mpiambina, fiambenana, asan'ny polisy, Schutzhund, fisintomana lanja, fankatoavana mifaninana ary hakingana.
Misy fikambanana maromaro hafa miasa amin'ny fanekena azy, izay hitranga tsy ho ela amin'ny ambaratonga eo an-toerana any Espana.
Hijery ohatra misimisy momba ny Alano Español
Alano Español Sary 1
Alano Español Sary 2
Alano Español Sary 3
Misaotra an'i Javier Astorga Vergara nanome ny Info momba ny fiompiana alika amin'ity vaovao ity. Tsidiho ny Espaniola Alanos Del Castillo de Encinar.
Misaotra manokana an'i Melanie Matthews ihany koa.
ny saoka japoney sy ny mix yorkie
dachshund mipetraka amin'ny tongony aoriana
inona ny alika beabull
papier buldog anglisy mifangaro alika kely
spaniel akoho sy mixer retriever volamena